Ukugqobhoza kwabafazi - Iindidi E Zomzimba Ubugcisa
Umxholo wokugqobhoza kwabafazi uhlala ungaqondwa kakuhle. Funda iinyani ezimbalwa malunga nesiko lokuhlaba.
Ukugqobhoza ngokuchasene nokuZicola
Isiko lokugqobhoza ukulondolozwa kobunyulu besini ngokwesini kuhlala kukholelwa ukuba lisusela kumakhulu, ukuba ayingamawaka, eminyaka. Nangona kunjalo, loo ngcinga iya kuba iphosakele. Ngapha koko, ukugqobhoza amalungu esini kuko konke oku, yinto yanamhlanje ethe yafumana indawo yokwenyani kuluntu malunga nee-1980s, nangona zikhona iimeko ezichaziweyo kwiinkulungwane ezidlulileyo.
imiqondiso yokuba inja yakho iyafa
Igalari yokubhoboza intlala
Imifanekiso yaseMadonna eQobayo
Ngesizathu esithile, abantu abaninzi babonakala belinganisa oku kugqobhoza kunye nolunye uqheliselo lwembali olwenzelwe ukuthintela ukungcola kwabasetyhini, i-clitorectomy. Le nkqubo ibandakanya ukususwa ngokupheleleyo kwe-clitoris, ngaloo ndlela kuthintelwe ukukhuthazwa ngokwesini kunye nokunciphisa umbono wokuba neentlobano zesini ngaphandle komtshato. Nangona le nkqubo ithathwa njengesiko kwezinye inkcubeko, ikholelwa ukuba yinkcubeko kwezinye. Oku ikakhulu kubangelwa yinto yokuba utyando lwenziwa ngokwesiqhelo ngaphandle yesibhedlele, ihlala yenziwe ngomnye umntu wasetyhini kusapho, kwaye akukho zintlungu zibulala iziyobisi okanye ianesthesia enikezelwa kubafazi abancinci abenza eli siko.
Xa uthelekisa, ukugqobhoza ubunyulu yinkqubo encinci engakhokeleli nakuphi na ukoluka ngokusisigxina kwilungu lesini lomntu obhinqileyo, ngaphandle kokuba inkqubo yenziwa ngokufanelekileyo. Ukongeza, isigqibo sokugqobhoza ngokwesiqhelo ngumfazi, kwaye asinyanzeliswa kuye.
Ukugqojozwa gwenxa kwabafazi
Xa kuvavanywa ngokusondeleyo, ukubhoboza ubunyulu akufani tu kuninzi lokugqobhoza amalungu esini. Ngokwesiqhelo, ukugqobhoza kudlula kwi-labias yangaphandle kunye / okanye ngaphakathi kwaye kufakwa kunye ne-barbell okanye iringi yentsimbi yokuthimba. Oku kuvala ngokufanelekileyo inxenye yokuvulwa kwelungu lesini kuthintelo lokungena, kusale indawo ivulekele eminye imisebenzi yomzimba.
Kwinxalenye enkulu, ukugqobhoza ubunyulu babasetyhini kungumfuziselo kuba ubucwebe bususwa ngokulula. Nangona kunjalo, ezinye iziqwenga zentelekelelo ziza nesitshixo esisebenzayo esifuna isitshixo sokuvula.
Izizathu zokuBhoboza ubunyulu
Izizathu zokuba ubume bendlela yobunyulu ziyahluka.
Njengoko kungqinwa kukuthandwa kweamakhonkco obunyulu, uninzi lwamabhinqa amancinci athabatha isifungo sokuziphatha okubi ngokwesondo, ubuncinci ade atshate. Ukugqobhoza ubunyulu yenye yezinto ezibubungqina besifungo, nokuba sesona sinamandla ngakumbi kunokushenxisa umsesane emnweni wakho. Nangona kunjalo, ukugqobhoza okunjalo kuzisa imibuzo ethile engqondweni. Ngokuqinisekileyo, akukho mntu uya kuze abone ukugqojozwa ngaphandle komniniyo kunye nomgqobhozi oyenzileyo, ubuncinci kude kube bubusuku bomtshato. Ngaba kufanelekile ukuba uhambe ngenkqubo yokwenza isikhumbuzi somntu ngesifungo? Kwabanye abantu, impendulo nguewe.
Ngamanye amaxesha, ukugqobhoza ubunyulu kuba luphawu lokunyaniseka phakathi kwamaqabane, kwaye ubucwebe bususwa kuphela kulindelo lokuba neentlobano zesini phakathi kobudlelwane.
Ubukhoboka kunye nokuthobela
Kukho esinye isikolo sokucinga ngokubhoboza ubunyulu esingabandakanyi ukuziyeka. Abasebenzi bobukhoboka kunye / okanye i-sadomasochism banokusebenzisa ukubhoboza ubunyulu babasetyhini ukufuzisela amandla kunye 'nobunini' besini sowasetyhini.
Umongameli wethu wenze umbulelo ngeholide yesizwe
Ukunyamekela Oku Kuhlaba
Njengaye nakuphi na ukugqobhoza, isini okanye enye into, kubalulekile ukugcina indawo icocekile ngexesha lokuphilisa. Yihlambe kube kanye, kodwa ungaphindi kabini, ngosuku, kwaye uvumele ixesha lokuhamba komoya ukukhuthaza ukuphilisa. Ungaze uthinte ubucwebe ngaphambi kokuhlamba izandla, kwaye uxhathise umnqweno wokuhlengahlengisa ubucwebe okanye usenokubangela ukuba ifuduke. Nxiba iimpahla ezicocekileyo suku ngalunye, kwaye utshintshe amashiti ebhedi kube kanye ngeveki ukunciphisa ukubonakala kweentsholongwane. Ukulandela ezi nkqubo kuya kunceda ukugcina usulelo oluhlabayo lukhululekile kungekuphela ngexesha lokunyanga, kodwa okoko ukhetha ukukhetha ukubhoboza.
Malunga Mortgages Iimveliso Zefeng Shui Amandla Ukusebenza Imisebenzi Yabantwana Amagama Abantwana
bubuphi utywala obongeza kwi-eggnog
onke amazwe ngokolandelelwano lwealfabhethi
ungasusa njani amabala kwizikhonkwane
uyibhloka njani inombolo yakho xa uthumela isicatshulwa
Ithetha ukuthini xa umntu ejonge kuwe kakhulu
Umyalelo wabaphangi beCarbonbean
enkosi ileta ngenkxaso yemali